विकास बैंकर संघका अध्यक्ष ढकाल भन्छन् एक दर्जन विकास बैंक चाहिन्छ « Artha Path
विकास बैंकर संघका अध्यक्ष ढकाल भन्छन् एक दर्जन विकास बैंक चाहिन्छ
विजनेशको लागी विकास बैंकमा समस्य छैन
राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक निती मार्फत मर्जरको पोलिसि ल्याएपछि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्य ह्वात्तै घटेको छ । देशमा कुनैबेला ८९ ओटा विकास बैंकहरु थिए अहिले घटेर २२ ओटामा आएका छन । त्यसमध्ये पनि केहीले मर्जरको एमोयू गरिसकेका छन भने केही विकास बैंक अझै मर्जरको पार्टनर खोजिमा भौतारिरहेका छन । पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्तारमा राम्रो नाफा कमाइरहेका गण्डकी, देवः कैलाश विकास बैंकसमेत मर्जरको प्रकृयामा रहेका छन । गण्डकी मेगा बैंकसँग, कैलाश प्राइम बैंकसंग र देवः कुमारी बैंकसंग मर्जरको तयारीमा रहेका छन ।
किन घटे विकास बैंक ?
विकास बैंकर संघका अध्यक्ष गोविन्दप्रसाद ढकाल भन्छन देशमा अझै १ दर्जन विकास बैंक चाहिन्छ । ८९ ओटा विकास बैंकबाट एकैपटक २२ ओटामा आउनु चानचुने कुरा होइन । ढकाल भन्छन राष्ट्र बैंकले मर्जर पोलिसि नै विकास बैंक घट्नुको मुख्य कारण हो । वाणिज्य बैंकले साखा खोल्न नपर्ने हिसावले विकास बेंकहरुलाई गाभ्दै आए । अर्को मर्ज गर्दा पाइने सहुलियतको लागी पनि धेरै वाणिज्य बैंकले विकास बैंकलाई मर्ज गरे । नयाँ संसोधनको प्रकृयामा रहेको बाफियाको कारण पनि विकास बैंकहरु घट्न थाले । नयाँ बाफियामा २ कार्यकालभन्दा बढी संचालक सिईओ हुन नपाइने प्रावधान र संचालकलाई जुन योग्यता तोकिएको छ त्यसमा धेरै विकास बैंकका संचालकको योग्यता नपुग्ने देखियो । विकास बैंकका संचालकहरुमा आफुले चलाउन नपाइने भएपछि मर्ज गरेर विदा हुनु बेस भन्ने भावनाले पनि काम गरेको जस्तो लाग्छ । संचालक सिईओको मनस्थीतिमा चेन्ज आउनु जरुरी छ । आफु आउट हुने निती आउन लागेपनि धेरैले मर्ज गराउनतिर सोचे ।
किन चाहिन्छ विकास बैंक ?
ढकाल भन्छन विकास बैंक चाहिने नचाकिने भन्ने कुरा देशको इकोनोमिले माग्ने कुरा हो । यो मुलुकमा विकास बैंकको खाँचो छ । हिजो ६० प्रतिसत जनसंख्या वित्तिय पहुँच बाहिर थियो । ग्रामिण भेगमा खुलेर होस या साखा पुर्याएर वित्तिय पहुँचचाँही विकास बैंकलेनै पुर्याएको हो । शहरमा मात्रै पुगेका वाणिज्य बैंकले गाउँमा वित्तिय सेवा दिएको थिएन । बैंकिङ कारोवारको बानी पनि विकास बैंकलेनै गराएको हो । अझै ४० प्रतिसत जनता बैंक वित्तिय सेवाको पहुँच बाहिर छन तिनलाई बैंकिङ पहुँचमा ल्याउन विकास बैंकको भुमिका महत्वपुर्ण छ । ढकाल भन्छन् विकास बैंक किन चाहिँदैन ? अझै निम्न मध्याम वर्गले रोज्ने भनेको विकास बैंकनै हो । वाणिज्य बैंकले भन्दा विकास बैंकले राम्रो सेवा दिएका छन । विकास बैंक र वाणिज्य बैंकमा के फरक छ ? राष्ट्र बैंककै केही अधिकारीहरु विकास बैंक चाहिन्छ अव मर्ज हुनुहुँदैन भनिरहेका छन । विजनेशको लागी विकास बैंकमा समस्य छैन ।
स्प्रेडको असर विकास बैंकमा
कोर क्यापिटल २४/२५ अर्व भएका बैंकले २/३ अर्व कमाउनु ठुलो कुरा होइन । अहिले जुन स्प्रेड तोकिएको त्यसले गतवर्ष भन्दा बैंक वित्तिय संस्थाको नाफा घट्दैछ । अहिले ट्याक्स क्लीयरको कुरा स्ल्यावमा आउनुपथ्र्यो । यो आउनुपर्छ तर क्रमवद्ध रुपमा लागुगर्दै जानुपर्छ । पर्सनल १०/२० लाख लोनको लागी पनि ट्याक्स क्लेरेन्स चाहिने कुराले अव बैंकहरुको नाफा झनै घट्नेवाला छ । व्यवहारिक कठिनाई छ, अहिले बैंकि वित्तिय संस्थामा कर्जाको डिमाण्डनै छैन । लगानी छैन, यसले सरकारले लिएको ग्रोथमा समेत ब्रेक लाग्ने र जिडिपीमा पनि समस्या आउँछ जस्तो लाग्छ । बैंक वित्तिय संस्था जति पारदर्शी कुनै क्षेत्र छैन । तर पनि किन यही माथी आक्रमण भैरहेको छ ।
(कुराकानीमा आधारित, ढकाल गरिमा विकास बैंकका सिईओसमेत हुन)